Oraah Soomaaliyeed ayaa oraneysa Illaahayoow Afkayaga haka wada yeersiin "ALIF WAXBUU LEEYAHAY IYO ALIF WAX MALEH", sifihii oraahdaa ayaa hadaba iiga muuqatay mid ka mid ah Mareegaha Reer Puntland in ay ugu xalaalsan yihiin aan u heystay.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Qorbajoog u heelan in dadaalka uu u hayo naftiisa ka sakoow hadana u dhagraaracinayay akhbaarta iyo xaalada dadkiisa iyo dalkiisuba marayaan ayaan ahaa, si aan u helo ilo aan xogtaas ka helo waxa ay Mareegta RaxanReebi iga dhaadhicisay in ay iiga xalaalsan yihiin ilaha kale ee wax waadixin jiray.
Anoo ayan iga maqnayn jeclaan eexeed iyo wax wacan oo kaliya in la iiga sheego dadkeyga iyo dhulkaygaba, ayay hadana Raxanreebi xadkiiba iga saartay jeer ay i aaminsiiso hadii aan Madaxweynaheyga Dr:C/raxmaan Faroole ka ilaawo XAFIDULAAHI, aan Denbi ku galayo, TOOBANA CARABKU IGA BOOBAYO.
Waxaan aad ula dhacay Raxan Reeb 11/01/2011, markii aan ka akhristay SHAKHSIGII SANADKA 2010,in uu ahaa Madaxweyne C/raxmaan Shiikh Maxamed Faroole.
Waxaase i galiweyday bilo ka dib in Shakhsigii bilada ay siiyeen iskadaaye, sidii Bisinka alle oo kale ay bogooda ku bilaabi jireen ay Baroor iyo burush wasakheysan ula tagaan, iyagoo aan gadaal u eegeyn raadkooda iyo halka ay kasoo socodbilaabeen.
Isweydii aragtida Jirjiroolanimada ay hageyso? maxay usoo durbaan tumayeen ka hor inta ay BULAANKA bilaabin?
Xiisadaha iyo dhiilooyinkii soo taxnaa tan iyo Xukuumadii Jeneraal Cadde Muuse, wax ka saa'id ah miyaa u muuqday Raxanreeb?
Xasaradda Garsoor kuwii jiri jiray ee RAXANREEBI NAGA INDHA SAABI JIRTAY miyay Saaka nooga duwanaaneysaa? mayee Waa MAYA, horaa u INDHO tirteen aniga iyo dadkale oo badan, oo xataa wax walboo aad qortaan hada waxa ay noo tahay XAFADULAAHIGII Madaxweyne Faroole ee aad na Barteen.
Waxaa cad in inbadan oo warbaahinta xorta ah isku magacowda ay u jilib xiran yihiin fikrado rakhiis ah, fidno, qabyaalad iyo qurunnimo kale, ayanna hayn wado quman oo anshaxa saxaafadu ka muuqdo.
Mareegta Raxanreeb oo magacu hore iigu muuqan fasirka af-soomaali ahaan ku fadhiyo ayaan isweydiin ka dib iisoo ifbaxday in RAXANKAREEB ay aheyd, saakana ay ka hareen Mareegihii kale oodhan kuwaasoo ka afkaar cadaa in MUDO AHBA.
Qore: Maxamed Ciise
Ila arka qoraalkii aan aadka u jeclaa ee RaxanKAreeb.com IYO SHAKHSIGII 2010.
(RBC Radio):- Madaxweynaha Dowladda Puntland ee Soomaaliyeed Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa loo aqoonsadey in uu yahay shaqsiga sanadka, waxaana sifooyinka loogu doortey in uu noqdo shaqsiga ama mas’uulka sanadka ay tahay hoggaaminta wanaagsan, hagida siyaasad jiheysan iyo hufnaan iyo horumar joogto ah.
Madaxweyne Dr, C/raxmaan Faroole ayaa si geesinimo ku dheehan tahay waxaa uu wadiiqo toosan u mariyey siyaasada dowladda Puntland isaga oo ka dhowraya leex leexad, eex iyo hagardaamo, taasi oo lagu yaqaan mas’uul kasta oo hanaan dimuqraadiyad lagu doorto.
Sanadkii aynu soo dhaafney siyaabo badan marka la qiimeeyay oo dhinacyo badan loo rogay waxqabadka iyo hanaanka siyaasadeed ragga taliya ee jagooyinka ka haya maamulada Soomaaliya ka jira Madaxweyne Dr, C/raxmaan Faroole waxaa uu ku soo baxay 100%, taasi oo ay ka marqaati kaceen Wadamada deriska la ah Soomaaliya, Ururada Midowga Afrika, Igad iyo Wadamada Beesha Caalamka.
Dr, C/raxmaan ayaa si weyn u ciyaarey door siyaasadeed oo aad ay ula dhaceen cid kasta oo daneysa arimaha Soomaaliya, waxaana baal dahab ah uu Madaxweyne C/raxmaan ka galay isku keenista iyo isku baadigoobka dadkii Soomaaliyeed ee ku kala tagey dagaaladii sokeeye kadib burburkii dalka Soomaaliya.
Dhinaca siyaasada ee soo jiidatay indhaha Caalamka ee Madaxweyne Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) uu ku talaabsadey ayaa ahayd arimaha gudaha, xiriirada gudaha iyo dibada, soo dhoweynta dadka Soomaaliyeed ee ka yimaada gobolada kale ee dalka, la shaqeynta hay’adaha samafalka iyo kuwa gargaarka bini’aadanimo.
Siyaasada Arimaha Gudaha ee uu fuliyey
Madaxweynuhu waxaa uu door muhiim ah ka ciyaaray mideynta laamaha amaanka sida Ciidamada Booliska iyo Asluubta oo haatan uu ka dhigay hal koox oo leh wada shaqeyn iyo iskaashi.
Sidoo kale Madaxweynuhu waxaa uu soo bandhigay siyaasad ku wajahan ladagaalanka burcad badeeda, wuxuuna dagaal adag la galay burcad badeeda Soomaalida oo in badan oo gobolada Puntland ah laga soo sifeeyay inta harsana haatan qorshe iyo go’aamo adag oo geesinimo leh uu ka qaatey.
Madaxweyne Faroole waxaa uu meesha ka saarey koox amaanka Puntland khatar ku ahayd, kuwaasi oo isku aruursadey buuraha Galgala, halkaasi oo ciidamada daafaca Puntland ay kaga guuleysteen koox xiriir hoose la leh Al-shabaab, taasi oo ay soo dhoweeyeen wadamada daneeya arimaha Soomaaliya.
Siyaasada arimaha gudaha ee Madaxweynaha Puntland oo aan la soo koobi karin halkii sano ee la soo dhaafay ayaan ka soo qaadaney dhowrkaasi qodob oo ahaa kuwii ugu muhiimsanaa.
Xiriirada Gudaha iyo Dibada
Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) waxaa uu daaha ka rogay siyaasad ka weyn tan ay qabaan rag badan oo ku nool gobolka Geeska Afrika gaar ahaan wadanka Soomaaliya, taasi oo ah in la helo Qaran mideysan, shacab isku duuban iyo dhul nabadeed oo ay Soomaaliya leedahay.
Madaxweynuhu waxaa uu kulan balaaran isugu keenay Culimada Soomaaliyeed ee dal iyo dibad ku nool, waxaa uu gogol u dhigay caasimada dowladda Puntland ee Garowe si loo helo xalka nabadeed iyo kan xasilooni ee dalka Soomaaliya, si meesha ay uga baxdo colaada labaatan sano jirsatay ee dalka ka jirta, waxaana Culimadu kulankooda ay ka soo saareen bayaan nabadeed oo ku socda dadka Soomaaliyeed.
Mar labaad waxaa uu Madaxweyne Faroole oo kaashanaya Golihiisa Wasiirada xubnaha ugu firfircoon uu martisooray Haween weynaha Soomaaliyeed meel walba oo ay Dunida kaga nool yihiin, waxayna haweenkaasi oo ka yimid gude iyo dibad ay soo buux dhaafiyeen Caasimada Puntland ee Garowe, halkaasi oo ay ku dhisteen Urur aan xuduud laheyn oo ay haweenku ku mideysan yihiin.
Intaa kaliya ugama harin Madaxweyne C/raxmaan arinta la isugu keenayo dadka Soomaaliyeed ee colaadii dalka kadib aan hal meel si wadar ah isugu arag, waxaa uu mar saddexaad Madaxweynuhu casuumay dhalinyarada kubada cagta ee gobolada dalka Soomaaliya, waxaana aqbalay oo ajiibay hadalka Madaxweynaha 15 gobol ciyaartooy ka socota, halka maamulka Soomaaliland oo ay la jireen saddex gobol aysan aqbalin casuumaada Madaxweyne Faroole, waxaana tartanka kubada cagta gobolada Soomaaliya oo aan la dhigin 20 sano lagu qabtey magaalada Garowe, iyadoo guusha koobka uu qaadey xulka gobolka Banaadir, waxaana xusid mudan in tartankaasi uu si nabadgelyo iyo reyn reyn ah ku soo idlaaday.
Madaxweynuhu waxaa uu xiriir toos ah la yeeshay Wadamada dibada ee daneeya arimaha Puntland, wadamadaasi oo xiriir saaxiibtinimo oo soo jireen ah la lahaa Puntland ama dhulka uduga, waxaa wadamadaasi qaarkood ay casuumaad sharaf u sameeyeen Madaxweynaha Puntland Dr, C/raxmaan.
Dr, Faroole waxaa uu safaro shaqo ku tagey wadamo badan oo Caalamka ah, iyadoo mas’uuliyiinta wadamadaasina ay ka soo wada hadleen xiriirka siyaasadeed, wadashaqeyn, ganacsi, kan iskaashi iyo maalgashi intaba, waxaana dalalkaasi ka mid ahaa Kuwait, Ethiopia, Kenya, Masar, Imaaraatka, Turkiga, Liibiya, Yemen iyo wadamo kale oo badan.
Hay’ada Saracen International ayaa ka mid ahayd shirkadaha ajnabiga ah ee Madaxweyne Faroole uu soo xiriiriyay si ay tababar Caalami ah u siiyaan ciidamada qalabka sida ee Puntland, gaar ahaan kuwa ilaalada xeebaha Puntland.
Shirkado laga leeyahay wadamada Muslimka ah ee ay ka mid tahay Kuwait ayaa Madaxweynuhu kula heshiiyey in ay maalgashi Caalami ah ku sameystaan gobolada nabada ku caanka ah ee Puntland, taasi oo ay labada dhinac heshiis ku gaareen.
Soo dhoweynta dadka Soomaaliyeed ee ka yimid gobolada kale
Madaxweynaha Puntland Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud waxaa uu ku dhawaaqey in dadka Soomaaliyeed ee ka soo cararay gobolada kale ee Soomaaliya oo ay weli ka socdaan colaadaha sokeeye lagu soo dhoweeyo gobolada Puntland, wuxuuna Madaxweynuhu dadka Soomaaliyeed uu ka codsadey in ay kala shaqeeyaan nabada iyo xasiloonida gobolada Puntland.
Xerooyin aad u farabadan oo loogu talogalay in ay ku noolaadaan dadka barakacayaasha ah ayaa maamulka Puntland uu ka dhisay dhamaan magaalooyinka waaweyn ee Puntland sida, Garowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Qardho, halkaasi oo uu maamulku kaga warqabo xaalada barakacayaasha.
La shaqeynta Hay’adaha Gargaarka iyo Kuwa Samafalka
Go’aanka Madaxweyne Faroole ee xiriirka Hay’adaha samafalka iyo kuwa gargaarka Bini’aadanimo ayaa noqday mid 100% ay ka maqsuudeen mas’uuliyiinta sar sare ee Hay’adaha Qaramada Midoobay.
Xiriiriyaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arimaha gargaarka Soomaaliya Mr, Mark Bowden ayaa Madaxweynaha Dowladda Puntland iyo Maamulkiisa ku tilmaamey kuwo 100% la yimid horumar, guul iyo horusocod labadii sano ee la soo dhaafey, taasi oo uu tilmaamey in ay ka dambeysay kadib markii Madaxweyne Faroole uu ciyaarey door siyaasada Soomaaliya tilmaam ku leh.
Mark Bowden waxaa uu sheegay in ay ku dayasho mudan tahay hoggaaminta Madaxweyne Faroole, waxaa warqad amaan iyo boggaadin ah oo ka timid Xiriiriye Mark Bowden laga akhriyey xaflad loo dhigay labo sano guuradii ka soo wareegtay maalintii xilka Madaxweyne loo doortay Madaxweyne C/raxmaan Maxamed.
Haddaba hadal badan haan ma buuxshee, waxaa halyeeyga hanaanka Siyaasadeed ee sanadkan hal mar guudka loo saarey Madaxweyne Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) oo haatan hoggaaminaya dowladda Puntland.
Dadka Soomaaliyeed ee ku kala nool gudaha iyo dibada oo ka maqsuuday hoggaaminta wacan waxay leeyihiin Hambalyo halyeeyga sanadka 2011 ee Soomaaliya Madaxweyne Dr, C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole).